Uyazi ukuthi chalcedony iyini? Itshe elinamakhemikhali awaziwa kakhulu ngama jewelers, odokotela, nabanolwazi lomlingo. Amakhemikhali kanye ne-geologists bachaza ukuthi i-chalcedony yigama elivamile elihlanganisa zonke izinhlobo ze-quartz. Itshe linesakhiwo se-cryptocrystalline, singahluka ngombala, isakhiwo, i-stratification, indawo yokwakheka, umbala. Mhlawumbe yingakho amagama amaningi eyaziwa, abantu abahlukahlukene ababiza ngokuthi i-chalcedony. Izakhiwo zamaminerali nazo zihlukile, njengombala wazo. I-canary, i-mineral of St. Stefan, iMecca, inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka noma i-moon Californian - yonke le chalcedony. Kunamanye amagama. Ngaphezu kwalokho, zonke izinhlobo zinegama layo. Ngakho-ke, amaminerali anephethini elikhethiwe elibizwa ngokuthi i-onyx noma i- agate. Amatshe ombala okwesibhakabhaka - i-sapphirine. Izinhlobo ze-Orange, ezibomvu nezibomvu zibizwa ngokuthi i-carnelian, i-cornelian, i-sarder. Ukukhanya okwesibhakabhaka okukhanyayo, kodwa kube nemithunzi ehlukene yama-mineral abizwa ngokuthi ama-chrysoprases noma i-plasma. I-matte eluhlaza okomnyama enezindawo ezibomvu ezikhanyayo - i-heliotrope. Futhi bonke baphatha igama elilodwa elivamile - i-chalcedony.
Amatshe, izindawo nezinkolelo
Yazisa le mineralali hhayi nje kuphela ngobuhle bayo bemvelo, nakuba imikhiqizo evela ku-chalcedony iye yathandwa njalo. Izimbali, izibuko ze-chalcedony, izibani, amatafula aphelele ahlobisa izindlu zabantu abadume kakhulu kuze kube yilolu suku. Abaphulukisi nabaphikisana nabo bayakwazisa i-chalcedony. Izakhiwo zalo zomlingo ziyahlukahluka. Itshe livikela abalwandle, balandela ukulangazelela komphefumulo, ujoyina izinhliziyo zabathandi. Eminyakeni eyikhulu namakhulu amabili edlule, intombazane encane ayizange igqoke i-chalcedony-stone. Izakhiwo zalo azizange zixoxwe ngisho. Kwakucatshangwa ukuthi wenza owesifazane ngokumangalisayo ekhangayo futhi angenakuvinjelwa emehlweni abantu. Ngakho-ke, imihlobiso, izindwangu, izindandatho kanye nemigexo ngetshe kwakuyisici esibophezelayo se-wardrobes ladies. Noma kunjalo, lezi zemihlobiso azizange ziqine njenge-chalcedony engavamile, engasetshenziswanga - itshe elinamakhemikhali angakwazi ukuhlasela ukuthukuthela nokuthukuthela (sapphirins), ukuhlukumeza nokuxubha. Ngakho-ke, abantu abaningi babegqoka izingcezu zamaminerali okuhlaza emaphaketheni abo noma izikhwama.
Chalcedony. Izakhiwo ezaziwa emithi
Imithi yanamuhla ayinakekeli kakhulu izindawo zokuphulukisa zamaminerali. Ngaphandle kokuba ochwepheshe bezokwelapha ngamatshe basebenzisa izakhiwo eziwusizo ze-quartz, kodwa lesi sayensi asikaqashelwa ngemithi. Noma kunjalo, abahlengikazi basezindaweni zasendulo bazi ukuthi i-chalcedony ikhulula ukulala nokulala, ukuhlambalaza ebusuku, igcina ukuphelelwa ukhathazeka, kukhulula ukucindezeleka. Ososayensi banamuhla abacwaninga amaminerali batusa ukuba bagqoke izidakamizwa eziluhlaza okwesibhakabhaka ezigulini ezinamandla, izilonda eziluhlaza okwesibhakabhaka - iziguli ezichithekile eziphazamisekile, kanye ne-heliotrope - kulabo abakwazi ukugcizelela kalula. Kodwa-ke, amatshe akufanele agqoke njalo, odokotela bathi. Amatshe okuphuza amandla "iziphuzo" amandla amabi noma aphethwe ngumuntu, ngcono impilo yakhe. Futhi lapho amandla amabi ephela, itshe liqala ukumbamba okuhle, libhebhethekise isimo somuntu. U-Arthur kuphela, u-Irina, u-Elena, u-Lyubov, u-Oksana noma u-Xenia bangagqoka leli daba isikhathi eside kunokunye. Ngeke neze amlimaze.
Iqabunga le-Laurel: izakhiwo zemilingo, ukubuyekezwa
Manje siyazi ukuthi kufanele senze kahle kanjani amahhashi ngaphezu kweminyango
Uthando lubaleka ekhaya. I-Psychology yokuzikhohlisa.
Ukuthunjwa kwamandulo. I-Tibetan Mo
Violetta Davydovskaya actress: Biography, ukuphila siqu. amabhayisikobho amaningi kanye uchungechunge TV
Aspidistra linesizotha: ukunakekelwa ekhaya
Ukuya eJalimane: E-Lower Saxony
Umsizi ka: iBamba, ezingeni iholo